Uhlobo olusha lweShotcut 19.06 lufika futhi lezi izinguquko zalo | Kusuka kuLinux
Uhlobo olusha lomhleli wevidiyo weShotcut 19.06 usanda kukhishwa, esakhiwa ngumbhali wephrojekthi ye-MLT futhi isebenzisa lolu hlaka ukuhlela ukuhlelwa kwevidiyo.
Kulabo abangazi lutho ngeShotcut, kufanele ukwazi lokho lesi isihleli sevidiyo esihle kakhulu, umthombo ovulekile weplatifomu, enenqwaba yezici, kufaka phakathi ukusekelwa kwe-4K Ultra HD TV.
Ngaphezu kwakho konke lokhu, uhlelo ingasebenza ngenani elikhulu lamafomethi alalelwayo namavidiyo kanye ne-codec efana I-AVI, M4A, MXF, VOB, FLV, MP4, M2T, MPG, MOV, OGG, WEBM, nabanye.
Futhi, futhi isekela amafomethi amaningi wesithombe afana I-BMP, i-GIF, i-JPEG, i-PNG, i-SVG, i-TGA, i-TIFF, kanye nokulandelana kwesithombe.
Ukusekelwa kwamafomethi wevidiyo nowomsindo kwenziwa nge-FFmpeg. Ungasebenzisa ama-plugins ngokusetshenziswa kwemiphumela yevidiyo nomsindo ehambisana neFrei0r ne-LADSPA.
Kusuka kuzici ze-Shotcut, kungenzeka ukugcinwa ukuthi kungenzeka ukuhlela okuningi nge-video ukwakheka kwezingcezu ngezindlela ezahlukahlukene zoqobo, ngaphandle kwesidingo sokungenisa noma ukubhala kabusha phambilini.
Kunamathuluzi akhelwe ngaphakathi okwenza izithombe-skrini, ukucubungula izithombe kusuka kwikhamera yewebhu, nokwamukela ukusakazwa kwevidiyo.
Into emangalisa kakhulu ukuthi lolu hlelo lusetshenziswa kalula futhi lunikeza imisebenzi eminingi nezici ukuhlela nokuphatha amavidiyo akho ngokuchofoza nje okumbalwa.
I-Qt5 isetshenziselwa ukwakha i-interface. Ikhodi ibhalwe ku-C ++ futhi isatshalaliswa ngaphansi kwelayisense le-GPLv3.
1 Izindaba eziyinhloko zeShotcut 19.06
2 Ungayifaka kanjani iShotcut kuLinux?
Izindaba eziyinhloko zeShotcut 19.06
Ngokukhishwa kwale nguqulo entsha yesihleli sevidiyo seShotcut 19.06, sizokwazi ukuthola kufayela le- ungeza izinto ezintsha zemenyu ukubonisa umbhalo ngezansi kwezithonjana (Buka> Khombisa umbhalo ngezansi kwezithonjana) bese usebenzisa izithonjana ezihlangene (Buka> Khombisa Izithonjana Ezincane).
Mayelana nesixhumi esibonakalayo sohlelo, manje singathola ukuthi inkinobho «Ripple All» ingezwe kuphaneli ngomugqa wesikhathi, ngenkathi inkinobho ye-Add Keyframe ingeziwe kuphaneli yozimele ongukhiye.
Ku-Shotcut 19.06 hotkeys Ctrl + 0-9 ayengezwa ukushintsha ngokushesha amaphaneli, ne-Alt 0 / + / - ukukala ozimele bokhiye.
I-offset yesikhathi isethwe kumasekhondi ama-5. Y Izinkinobho kuphaneli zihlelwe kabusha ukufanisa imenyu “yokubuka”.
Engxenyeni yezihlungi singakuthola lokho ungeze isihlungi ukusika ividiyo "Nqampuna: Unxande" ngokusekelwa kwesiteshi se-alpha (ukwenza izinto obala). Ukuxhaswa kwesiteshi se-Alpha nakho kungezwe kuthuluzi lesitshalo eliyisiyingi (Isitshalo: Umbuthano).
Izihlungi ezintsha ze-flip mpo nazo zengeziwe ((Vertical Flip), ukufiphala (Blur: Exponential, Low Pass kanye neGaussian), ukunciphisa umsindo (Nciphisa Umsindo: HQDN3D) bese ufaka umsindo (Umsindo: Ama-Fast and Keyframes).
Ngenkathi ezinye izihlungi zaqanjwa kabusha: "Uhlaka Lwesiyingi" kuya ku- "Nqampuna: Umbuthano", "Nqampuna" kuya ku- "Nqampuna: Umthombo", "Umbhalo" kuya "Umbhalo: Okulula", "Umbhalo we-3D" kuya ku- "Umbhalo: 3D", "Nqwabelanisa i-HTML" kuya ku- "Umbhalo: I-HTML "," Fiphalisa "kuya ku-" Blur: Ibhokisi "," Nciphisa Umsindo "ukuze" Nciphise Umsindo: I-Smart Blur "
Ungayifaka kanjani iShotcut kuLinux?
Kulabo abanentshisekelo yokukwazi ukufaka lesi sihleli sevidiyo ohlelweni lwabo, kufanele balandele imiyalo engezansi.
Indlela yokuqala ukuze uthole lo mhleli wevidiyo ohlelweni (kusebenza kuphela kuze kufike ku-Ubuntu 18.04 lts), ungeza indawo yokugcina yohlelo ohlelweni lwethu. Okwakho Kufanele sivule i-terminal nge-Ctrl + Alt + T futhi kuyo sizokwenza okulandelayo.
Okokuqala sizokwengeza indawo yokugcina izinto nge:
Ngemuva kwalokho sivuselela uhlu lwamaphakeji nezinqolobane ngalo myalo:
Ekugcineni siqhubeka ukufaka uhlelo lokusebenza nge
Futhi i-voila nayo, izobe ifakiwe ohlelweni.
Enye indlela kufanele sithole lo mhleli, ilanda uhlelo lokusebenza ngefomethi yayo ye-AppImage, okusinika indawo yokusebenzisa lolu hlelo ngaphandle kokufaka noma ukufaka izinto ohlelweni.
Kulokhu vele uvule i-terminal nge-Ctrl + Alt + T bese kuyo yenza umyalo olandelayo:
Ukwenze lokhu manje kufanele sinikeze izimvume zokwenza kwifayela elilandiwe nge:
Futhi ekugcineni singakwazi ukusebenzisa uhlelo lokusebenza ngomyalo olandelayo:
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Uhlobo olusha lweShotcut 19.06 lufika futhi lezi yizinguquko zalo
I-Linux manje isezikhondweni eziphezulu ze-500